फेरी काठमाडौँमा के भयो यस्तो? रत्नपार्कको फुटपाथमा अ’पाङ्ग दाई फेला ,हेर्नुहोस जादुमय स्वर (भिडियो) – Tufan Media News
फेरी काठमाडौँमा के भयो यस्तो? रत्नपार्कको फुटपाथमा अ’पाङ्ग दाई फेला ,हेर्नुहोस जादुमय स्वर (भिडियो)
१९ पुष २०७७, आईतवार २१:३५
(भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ)झुक्किएर पनि अरूलाई नसुनाउनुहोस् यी ७ सपना !
जब मानिस सुत्छन् तब विभिन्न किसिमको दृश्य देख्छन् । जसलाई हामी सपना भन्छौं । कतिपय मानिसहरूको आफूले देखेको सपना बारे अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सुनाउने बानी हुन्छ । हुन त आफूले देखेको सपना सुनाउनु कुनै आपत्तिको कुरा होइन । तर तपाईँले देख्नु भएको सपना भने सबै सुनाउनु उचित नहुने धार्मिक मान्यता छ ।
यस्ता सपना अरूलाइ अरूलाइ सुनाउनु राम्रो हुदैँन ।
-तपाईँले सुत्ने क्रममा बलिरहेको दियो वा स्वयं भगवान् नै प्रकट भएको सपना देख्नु हुन्छ भने सपनाको सङ्केत तपाइको सफलता हो । उक्त कारण यस्तो सपनाबारे कसैलाई पनि नबताउनुहोस्
-मानिसहरू सपनामा सर्प देख्दा वा सर्पले टो*क्दा डरा-उने गर्छन् कि त अशुभ हुन्छ भन्ने सोच्ने गर्छन् । तर त्यसो होइन जब तपाईँ सुत्ने क्रममा सर्प वा सर्पले टोकेको देख्नु हुन्छ बुझ्नुहोस् कि तपाईँले मान सम्मान पाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो सपना पनि अन्य व्यक्तिलाई नसुनाउनुहोस् ।
-तपाईँले सपनामा माछा खाएको वा पकाएको देख्नु हुन्छ भने पनि थाहा पाउनुहोस् तपाईँलाई आकस्मिक धन लाभ हुनका साथै सुख पनि प्राप्ति हुनेछ ।त्यसैले यो सपना पनि अन्य व्यक्तिलाई नसुनाउनुहोस् ।
-जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ तब तपाईँले सपनामा सुन्दर बगैँचा देख्नका साथ साथै फल लागेको बोट देख्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि तपाइको आउने समय सुखसँग बित्दैछ ।
– तपाईँले सपनामा आफूलाई मृ*त अवस्थामा देख्नु हुन्छ भने थाहा पाउनुहोस् कि यस सपनाको अर्थ तपाईका जीवनमा आइपरेका हरेक समस्याहरूको अन्त्य हुँदै जानु हो ।त्यसैले यो सपना पनि अन्य व्यक्तिलाई नसुनाउनुहोस् ।